Ra'iisalwasaarihii Liibiya oo la afduubay - BBC News Somali
Ra'iisalwasaarihii Liibiya oo la afduubay
Image caption Ra'iisalwasaarihii Liibiya ee la afduubay
Ra'iisalwasaarihii Liibiya Cali Seydaan ayaa saaka laga afduubay hudheel ku yaalla magaalada madaxda Daraabulus amma Tripoli ee dalka Liibiya, waxana la sheegay inay halkaasi ka kaxaysteen ra'iisalwasaaraha koox dabley ah oo hubaysani saaka saacadihii hore.
Afduubkaasi waxa sheegtay koox ka mid ah kooxaha hubaysan ee dalkaasi oo la baxday 'Cutubka la-dagaallanka denbiyada', waxayna sheegeen inay fulinayeen amar ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee dalkaas oo ahaa in la soo qabto ra'iisalwasaaraha. Hasse ahatee wasiirka caddaaladda ee dalka Liibiya, Saalax al-Marqaani, iyo xeer ilaaliyaha laftisa, labaduba waxay beeniyeen arrintani, waxayna sheegeen in aanu jirin wax amar ah amma waaran ah oo ku saabsan xidhitaanka ra'iisalwasaaraha.
Afduubkani waxa uu ku soo beegmay iyada oo ay jirto cadho kooxaha Liibiya qaarkood ay ka qaadeen xidhitaankii Maraykanku ay kula kaceen Sabtidii nin la yidhaa Abu Anas al-Liibi oo la rumaysan yahay in uu ka mid yahay hoggaamiyayaasha sarsare ee al-Qaacida, horena loogu haystey in uu ka danbeeyey falal argagixisnnimo.
Dawladda dalkan Ingiriisku waxay si weyn u cambaaraysay afduubkaasi ra'iisalwasaarihii Liibiya, waxayna ku baaqday in si dhakhso ah loo sii daayo.
Cali Seydaan waxa uu dalkaasi ra'iisalwasaare ka ahaa muddo ilaa hal sano ah.
Image caption Khariidadda Liibiya
Dawladda Liibiya waxay sheegtay in ilaa hadda aan la ogeyn meesha lala aadey ee lagu hayo, waxayna shir degdeg ah iskugu yeedhay golaha wasiirada, si arrintani looga hadlo, loogana talo bixiyo.